WASHINGTON, DC, Caamsaa 28, 2018 (VOA Afaan Oromoo) — Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa galaan magaalaa gabaa roobii ganda 21 jedhamu keessa jiraataa kan turan obbo Ahmed Jibril hidhattoota mootummaan dilbata ganama barii rasaasaan dha’amanii ajjeefamuu isaanii jiraattonni naannoo fi maatiin isaanii fi bulchiinsi aanaa Sanaa nuuf himaniiru. Obbo Ahimed nama nagaa hawaasa keessatti jaaltamaa ta’uun gabaasameera.
Haati warraa obbo Ahmed aadde Caaltuu yooyyaa akka jedhanitti ganama barii akka lakkoobsa Itiyoophiyaa sa’aati 11tti namoonni hidhatan dhufanii cufaa nutti rukutanii bani jedhanii erga bansiisanii booda itti dhukaasan jedhan.
Anaan afaan na cuqqaalanii akka hin iyyine na dhorkanii itti dhukaasanii booda konkolaataa dhaan fudhatanii deeman jedhan.
Bulchaan godina Hawwaa Galaan obbo Mittikkuu Lammeessaa illee obbo Ahmed Jibril nama nagaa hawaasi dhugaa ba’aaf jedhan. Maaliif akka ajjeefaaman nuufis gaaffii dha. Namoonni shakkaman to’annaa jala oolanii jiru. Poolisiinis dhimma isaa qorataa jira jedhan.
Via Solomon Korsa, Caamsaa 28, 2018
Ob. Ahmed Jibril Rabbiin Lubbuu keessan jannataan ha qanansiisu. Lubbuu keessan karaa malee harka ergamtuu Waahiyyaannetti baate lammiin kee gumaa kee ni baasa, hin haftu.
Seenaa Obbo Ahmed gabaabaatti:
Ahmed loltuu dargii ture.
Achii erga galee fuudhee maatii horeera.
Maatii isaa jiraachisuuf gabaa keessa waan akka shunkurtaa, Qullubbii fi waan adda addaa gurguree maatiisaa bulchaa ture. Booddanarra jireenya maatiisaa fooyyeffachuuf jedhee hojii wayyaalummaa ykn daldaalummaatiin Gabaa Roobii, Machaaraa, Canqaa fi magaalota xixiqqoo irra deemee hojjechuu qabe. Kanaanis jiraata. Yeroo baay’ee basaastota wayyaaneetiin ABBAA TORBEE tti shakkamee hordofamaa ture.
Namni ajjeefamuu Ahmediif sababa gahaa ta’e jedhamaa jiru, basaasaa opdo kan ta’e Ob. Tashoomee Dirribaa jedhama. Tashoomeen nama kana bahaa fi galasaa akka hordofu wayyaanotaan akka gita hojii tokkotti itti kennamee, innis ittiin jireenyasaa jiraata (?)
Dhumarra guyyaa dheengaddaa halkan irraa gara bariitti namni Tashoomee jedhamuu fi hidhattootni biroon Ob. Ahmed manasaatii gadi fuudhanii, ija maatiisaa duratti rasaasa itti roobsani. Achumatti arraba irraa kutani. Ergasii konkolaataa ittiin dhufan keessa buusanii adeemsa Kiilo meetra muraasa booda ganda Waachoo jedhamutti karaarraa qabanii reeffasaa daggalatti gatanii bira darbani. Achiiti kan ijoolleen naannoo sanaa arganii iyyan.
Seenaa basaasticha Deheninnetii OPDO Tashoomee Dirribaa muraasa:
Tashoomeen naannoo baadiyyaa Gabaa Roobii tti dhalate. Sadarkaan barnoota kutaa 2.
Loltuu / Waraana Wayyaanee keessa ture.
Baadimmeedhaa dirqamasaa fixee gara biyyaatti gale. Erga galee dhaaba opdo jala shokshokuun hojii basaastummaa irratti bobba’e. Booda basaastummaadhuma kanaan carraan hojii kennameefi. Yeroo ammaa Deheninnetii opdo wayyaanee ta’ee tajaajila.
Suura Tashoomee ammaaf hin arganne. Ijoolleen naannoo Hawaa Galaan suura isaa nuuf barbaadaa, ummatni hin beekin isa ha baruu.
Sirna Awaalcha Goota Ahmed Jibril
Previous articleSidama Globally Marks the 16th Anniversary of Looqqe Massacre Whilst Commemorating All Victims of the Last 27 Years in Ethiopia
Next articleEthiopia’s Mamitu Daska wins record sixth Bolder Boulder
Afaan Oromoo Admin - September 12, 2020 0
Afaan Oromoo Admin - September 11, 2020 1